Ukunyuka kweMarketimensional Marketer | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Novemba 9, 2012 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ngale njikalanga, bendityelele kakhulu neNew Media Club e-IU Kokomo. Iklabhu yenziwe ngabafundi, abatsha nabaphumeleleyo, kunye noonjingalwazi abakhokelayo. Ingxoxo ibiyi ishishini losasazo olutsha.
Ndiyakhumbula xa ndiqala ukuqala DK New Media, umntu endisebenza naye owaziwayo wandixelela ukuba ndilibale ukusebenza kuyo yonke imiba yeenzame zenkampani zokuthengisa kwaye ndijolise kwindawo enye. Ndiphikisile ngelithi le yingxaki nee-arhente… zinokujolisa okuncinci kunye nobuchwephesha kwindawo enye yokugxila- uphawu, uyilo, ubudlelwane boluntu, ukuthengisa nge-imeyile- kodwa abanalo ulwazi olwaneleyo lokuba imizamo yabo iyichaphazele njani imizamo yokuhla nokuhla.
Eminye imizekelo kwiindawo ezahlukeneyo ekugxilwe kuzo:
Ukwenziwa kwemizobo -Abaqulunqi abakhulu bayayiqonda indlela yokucoca iifayile zabo ukuze zenze kube lula ukuba umphuhlisi wewebhu atyumbe kunye nedayisi kunye nemizobo yokuvelisa iisayithi abazisebenzisayo.
Videography -Ababhali bevidiyo abakhulu bayayiqonda indlela yokwandisa amaphepha abawashicilelayo kunye nokuqonda iindlela zentengiso zokwandisa kunye nokukhuthaza ukufikelela kweevidiyo zabo.
email Marketing - abathengisi abakhulu be-imeyile bayaliqonda ithuba lokuqhuba ukubhaliswa kwimidiya yoluntu ukuze bakwazi ukwakha uluhlu olungcono kunye nokuqhuba ukuthengisa ngakumbi.
UkuSebenza kweeNjini zoPhando - Abacebisi abakhulu be-SEO bayakuqonda ukuguqulwa kokusebenza kunye nomxholo wentengiso yeendlela ezilungileyo zokuqinisekisa ukuba inqanaba likhokelela kutrafikhi eguqukayo.
Njengoko uyazi, ukuvelisa kushenxisele kude nonxweme kumazwe asaphuhlayo. Ukwakha icandelo elincinci, ukuyiphindaphinda loo ndawo, kunye nokwakha iziseko zophuhliso lwezigidi zeendawo kulula kumazwe asaphuhlayo. Ngelixa icandelo lokuvelisa lifudukele elunxwemeni, uMntla Melika usakha iifektri zendibano kwaye uqhuba izinto ezintsha kwimveliso. Ngenxa yoko, abadali, abayili kunye neenjineli zisenayo imisebenzi… kodwa abavelisi abanayo.
Ukuthengisa kulandelayo. Sisebenza neenkampani ezininzi ezingaphesheya kolwandle ezenza uphando, umxholo, uyilo kunye nophuhliso. Umgangatho womsebenzi wonke ulungile njengoko sinako ukuvelisa apha ekhaya, kuphela bakwenza ngokukuko. Asinakho ukukhuphisana. Ngenxa yoko, impendulo kukunyusa izixhobo zokusebenzisana kunye nokwandisa izixhobo zethu kude nonxweme.
Iqela lethu lokuthengisa likhokela, lenza, kwaye liphumeze isicwangciso sisonke. Kuyinyani apho sisetyenziswe kakuhle. Izixhobo zethu ezingaselunxwemeni zenza umsebenzi omangalisayo, zisandisa izixhobo zethu kwaye zisinceda ukuba silinganise inkampani yethu ngaphandle kokuqhuba iindleko kakhulu. Akukho ngaphandle kwamaqhuqhuva ayo, kodwa kube yimpumelelo kwaye siyaqhubeka nokukhula kwaye sifumana ingxelo elungileyo evela kubaxhasi.
Esi sisilumkiso kubathengisi phaya. Ukuba uthatha isigqibo sokuba ufuna ukubalasela endaweni yokuqonda ukuba ubungcali bakho bungena njani kwiphakeji iyonke, unokutshintshwa njengayo nayiphi na inwe kumgca wemveliso. Ukuba awuvumelani, uyazihlekisa. Ngokwam, ndiyazi ukuba kukho abayili ababhetele kunam, abaphuhlisi abangcono kunam, kunye nababhali kunam… kodwa apho ndikhuphisana khona yindlela yokubeka uyilo, uphuhliso kunye nomxholo ndawonye ukuqhuba iziphumo. Umnqweno wam, ubuchule kunye namava kuyo yonke into eye yabonwa yam ibiyeyona nto ibalaseleyo kum.
Kwiminyaka embalwa kamva kwaye iarhente yosebenza naye ilandisile iqela lakhe ngaphaya kobuchule babo obuphambili nakwimizamo yokunyuka nokuhla. Unamandla amakhulu kwaye olo tshintsho luya kuqhuba ukuqhuba impumelelo yakhe ebaleni lakhe.
Ukuba ungumakethi ubambekile emsebenzini apho ungafundi kuluhlu lwezicwangciso-qhinga zokuthengisa, ubuchwepheshe kunye nokufumanisa… zenzele inceba kwaye uqalise ukuzifundisa, ukuzama nokuzalisekisa naphi na apho unako. Yiba sisiseko ngokuqonda indlela yobunjineli kunye nokudibanisa isicwangciso! Abathengisi abawuqondayo umfanekiso omkhulu bakwimfuno enkulu ngoku… iingcali ziye zihambe.